आमा धर्ती हुन् भन्नेहरूले ,बा आकाश हुन कसैले भनेन ।
आमाको कुरा सबैले लेखे ,बाको कथाहरू कसैले लेखेन ।।
आज बुबाको मुख हेर्ने दिन, कुशे औँसी । मैले बुबाको सम्मानमा यी शब्द कोर्दैछु । मैले जस्तै सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो जन्मदाता पितालाई सम्झिने र सम्मान गर्ने दिन– ह्याप्पी फादर्स डे….बा !
आजभोलि फेसबुक भरी सबैले आफ्ना बुबा प्रति सम्मान गरेका अवस्थाका फोटोहरू धेरैले पोस्ट गरेका हुन्छन् । आफ्ना बुबा प्रति गरिएको फेसबुक सम्मान बुबाहरूले बुझेका पनि हुन्छन् । बुढेसकालमा अनपढ बुबाहरू नबुझेका पनि हुनसक्छन्।
देखेका पनि हुन्छन् नदेखेको पनि हुन्छन्। फेसबुक भरी सजिएका अङ्ग्रेजी शब्दहरू रङ्गिन दुनियाँमा मौलाएको सजिलो संस्कृती । बुबाको नाममा पोस्ट भएका यी रङ्गीचङ्गी आकृती ! आजका दिन धेरैले आफ्ना बुबाको बारेमा मन भरिका शब्दहरू कोरेर आफ्नो बुबाको तस्विर पोस्ट गरेका हुन्छन् । शब्दहरू सिँगारिएर मुक्तक कविताहरू कोरेका हुन्छन् ।
म सानो छँदा, यो संसारको सबैभन्दा ठूलो मान्छे मैले आफ्नो बालाई सम्झन्थें । जब म जवान भएँ हरेक कुरामा म आफ्नो बुबालाई कमजोर र झ्याउ देख्थें । आज मेरो छोरा जवान भयो । आज म फेरि मेरो बुबालाई महान् ठान्छु । किनकी मेरो एक खुसीकोलागि बुबाले हजार पटक हार्नु भएको कुरा मैले आफैले महसुस गरेको छु । त्यसैले आज म मेरो बुबा प्रति गर्व गर्छु ।
बैँस र पैसा आफन्त सबै चिज स्थायी होइन । मरेर लैजान सक्ने चिज केही छैन । एक दिन सबैलाई छाडेर जानुपर्ने जिन्दगीमा भाग्यमानी त त्यो हो जसले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा पनि अरूको बोझ भएर बाँच्नुपर्दैन । सकस ,पीडा बिना , शान्तिले मर्न पाउँछ । उमेर छँदा, शक्ति छँदा, सम्पत्ति छँदा, साथीभाइ छँदा यस्तो नसोचौँ कि जीवन सधैँ यसैगरि नै बिती जानेछ । बैँस, रूप, धन दौलत आफन्त भनेको स्थायी हुँदैन । तपाई जतिसुकै शक्तिशाली हुनुहोस्, जतिसुकै प्रभावशाली हुनुहोस्, जतिसुकै धनी हुनुहोस्, जतिसुकै प्रतिष्ठित हुनुहोस्, बुढेसकालमा ती सबै अर्थहीन हुँदै जानेछ ।
अर्थपूर्ण त त्यो हुनेछ, तपाईले जीवनलाई कति बुझ्नुभयो ? कसरी बिताउनु भयो ? जीवन स्थायी हैन । हाम्रा खुसी, हाम्रा समृद्धि, हाम्रा सम्बन्ध, हाम्रा प्रभाव, हाम्रा सम्पत्ति केही पनि स्थायी छैनन् । यो कुरा बोध गरौँ । जीवनलाई सरल, सहज र मिठासपूर्ण बनाउने प्रयास गरौँ । किनभने भोलि आफ्नो भन्ने केही हुनेछैन, कोही हुनेछैन । जीवनको अन्तिम अवस्थामा साथ र सहारा आफ्नो परिवार हुन् । आफ्ना अभिभावक बुबाआमा प्रति सबैले आदर गरुन् माया गरुन् ।
खाली हात जन्मेर खाली हात जानुपर्ने यथार्थलाई हामी सबैले मनन गरौँ । बाँचुन्जेल मात्र हो जिन्दगी , मरे पछि खरानी । हाम्रो जिन्दगीमा को आए को गए । समयको रफ्तारसँगै जीवनमा तिता मिठा पलहरू आज कुनै कति भुल्न खोजेर पनि भुल्न सक्दैनौं । कुनै सम्झनामा नै हुँदैन । के लाई सम्झौँ के लाई बिर्सौँ ?
जिन्दगीमा कति आत्मीयता जोडियो। कति तोडियो तर पनि हरपल नयाँ नयाँ सोंचमा अनेक पलहरूमा जीवन बित्ने गर्दछ । अब साहित्यमा पनि खोजिरहन्छु ,नयाँ शब्द नयाँ गीत, कविता कथाहरू किन थाक्दैन यो दिमागी खोज ? निरन्तरता यसरी नै बढि रहन्छ । आफूलाई लागेको कुरा लेख्नुपर्छ । अरूलाई पनि शेयर गर्नुपर्छ ।
लेखेका कुरा स्थानीय पत्रपत्रिका अनलाईन खबरमा छापिनुपर्छ । हाम्रा अग्रजहरू जिन्दगीको उत्तराद्धमा बुढेसकालमा सत्तल , मठ मन्दिर, चौतारीमा बुढापाकाहरू भजन गाउँछन् मनका भावनाहरू एक अर्कामा सुनाउँछन् बस्छन् । भगवानको नाम लिन्छन् । समयले फुर्सद बनाई दिएर जिम्मेवारी नदिए पछि बुढेसकालमा मान्छे खुम्चिएर बस्नु पर्ने रहेछ ।
मन दौडिए पनि ज्यान हिड्न नसके पछि, काम भएर पनि जाँगर नचले पछि अरूलाई अह्राएर बस्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा हामीले जवान हुँदा महसुस नै गरेका हुँदैन । यसरी जिन्दगीको आरोह अवरोहमा हामी सन्तान भएर जन्म लिएर आमा बुबाको माया ममता पाउँदै भोलि फेरि आफै आमा बुबाको भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ । प्रकृतिको नियम यसरी नै चलिरहेका हुन्छन् । आज बुबाको योगदानको कदर गर्दै सबै सन्तानहरूले आफ्नो बुबा, जन्मदाता, पिता प्रति श्रद्धाभावले नमन गरौं –ह्याप्पी फादर्स डे
बजेट छरियो, दीगो विकास भएन
रेडक्रसमा छरिएका भ्रमले उब्जाएका प्रश्न
अपराधको शिकार बनेको अवोध बाल्यकाल (अनुभूति)
पुच्छरले टाउको हल्लाउने देश
क्रियाशिल सदस्यको बारेमा जानकारी नपाउने कस्तो आन्तरिक लोकतन्त्र हो : केसी
एक घर एक रोजगारः हरित रोजगार
युवाको नेतृत्व विकास र उद्यमशीलतामा परिषद्
देउवाको ‘देवत्वकरण’ प्रयास
व्यवस्था फेरिँदा पनि अवस्था नफेरिएको देश
स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी, धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह